Noho ny antandrevaka sa… nampandosirina ? tafatsoaka niaraka amin’ny rojovy ireo jiolahy roa | NewsMada
Par Taratra sur 08/11/2019
Mbola tsy hita popoka hatramin’izao ireo jiolahy roa, voalaza fa tena raindahiny sady mahery vaika, tafatsoaka tao an-tokotanin’ny biraon’ny polisy, ao Bazarikely Toamasina, ny zoma lasa teo, na dia efa nifatotra rojovy aza. Noho ny antandrevaka, sa… nampandosirina ?
Efa ho herinandro izay, mbola tsy hita ny nanjavonan’ireto jiolahy roa tafaporitsaka niaraka tamin’ny rojovy ireto. Voasambotry ny polisin’ny Fip tao Depot Toamasina izy roa lahy ireto ka natolotra ny polisy misahana ny Ady heloka bevava (BC) ao Bazarikely. Nofatorana rojovy ry zalahy, saingy tafaporitsaka ihany tao amin’ny toerana nihazonan’ny polisy azy ireo tamin’io fotoana io. Mahavariana ihany ny nahafahan’ireto jiolahy mifatotra ireto tafatsoaka avy ao amin’ny polisy. Mifefy sy misy tariby maranitra anefa ny tamboho. Tsy vitan’izay fa mbola misy polisy miambina ihany koa eo amin’ny vavahadibe. Mampiahiahy ny rehetra ihany ity zava-nitranga tao amin’ny polisy ity satria tamboho ny manodidina ary sarotra hiakarana ary tranombarotra lehibe ny eo akaiky eo ary vavahadin’ny polisy. Fantatra, araka ny angom-baovao avy amin’ny polisy fa isan’ireo jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana i Levazaha sy ny namany iray niaraka taminy. Manahy ny rehetra fa misy fisiana kolikoly avo lenta ambadik’ity raharaha fitsoahana jiolahy ity.
Jiolahy efa nahafaty polisy…
Voamarina tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao marim-pototra hatrany fa i Levazaha no tompon’antoka tamin’ny fitifirana polisy mpiana-draharaha tao Androranga, ny fiandohan’ity toana ity. Isan’ireo nahatezitra ny polisin’ny Fip manao fisamborana ireny jiolahy raindainy ireny ity raharaha ity satria izy ireo misambotra kanefa votsotra tampotampoka eo. Misy ny tandrevaka teo amin’ireo polisy sa niniana nampandosirina tsotra izao ireto jiolahy raindahiny ireto. Efa ao anatin’ny faritra misy ny polisy no tsy hita tampoka, izay somary mahavariana ihany amin’ny trangan-javatra toy izao. Goragora tanteraka ny fiambenana ireny jiolahy raindahiny ireny?